Maxay Tahay Mawduuc Abuurista Isticmaalaha Ugu Sarreeya Ee Da'da Warbaahinta Bulshada
Axad, Febraayo 5, 2017 Axad, Febraayo 5, 2017 Bloomka 'Corey Bloom'
Waa wax aad u la yaab leh in la arko sida teknolojiyaddu ugu soo ifbaxday muddadaas yar. Waqti dheer ayaa dhaafay maalmihii Napster, MySpace, iyo AOL dial-up oo xukuma suuqa internetka. Maanta, barnaamijyada warbaahinta bulshada ayaa ugu sarreeya adduunka dijital ah. Laga soo bilaabo Facebook ilaa Instagram illaa Pinterest, dhexdhexaadiyayaashan bulsheed waxay noqdeen qaybo muhiim u ah nolol maalmeedkeena. Ha ka fogaan inta jeer ee aan ku qaadanayno baraha bulshada maalin kasta. Sida laga soo xigtay Stastista,
Khamiis, May 28, 2015 Wednesday, May 27, 2015 Petri Rahja
Sawirada isticmaalaha la soo saaray waxay u noqdeen hanti qiimo u leh suuqleyda iyo astaamaha warbaahinta, iyagoo siinaya qaar ka mid ah waxyaabaha ugu mashquulsan uguna kharashka badan ee wax ku oolka ah ololaha– dabcan mooyee inay ka dhalato dacwad malaayiin doolar ah. Sannad kasta, noocyo dhawr ah ayaa tan ku barta habka adag. Sannadkii 2013, sawir qaade ayaa ka dacwooday shirkadda BuzzFeed $ 3.6 milyan ka dib markii uu ogaaday inuu isticmaalay mid ka mid ah sawirradiisa Flickr fasax la'aan. Getty Images iyo Wakaaladda France-Presse (AFP) ayaa sidoo kale la kulmay dacwad $ 1.2 milyan ah
#Atomicchat: Mawduuca Isticmaalaha Isticmaalaha
Axad, Juun 15, 2014 Douglas Karr
Haddii aad iga raacdo Twitter-ka, waxaan la yeelannay kulan sheeko wacan oo lala yeeshay dadka Atomic Reach oo ka hadlaya Mawduuca Isticmaalaha Isticmaalaha (UGC). Waa kuwan waxyaabaha muhiimka ah iyo waxyaabaha muhiimka ah ee laga soo qaado #AtomicChat Twitter chat, oo la martigaliyo habeen kasta oo Isniinta 9pm EST / 8pm CST / 6pm PST. Raac @Atomic_Reach dhammaan wixii cusbooneysiinta suuqgeyntaada ah! Gaaban mawduuca isticmaale-soo saaray, UGC waa ereyga loo isticmaalo in lagu sharaxo nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha sida fiidiyowga, baloogyada, foomka wada hadalka